Nbudata Fleet El Al Israel Airlines v1.0 FSX & P3D - Rikoooo
Fleet El Al Israel ụgbọ elu v1.0 FSX & P3D
downloads 102 800
Complete ndepụta na akpaaka-installer / ngwugwu
Rikoooo nwere obi ụtọ ịnye ụgbọ elu El A zuru ezu na ọrụ n'ime afọ 2014 Ihe ngwugwu a dakọtara na Flight Simulator X SP2 / Acceleration na Prepar3Dv1 (v2 elele ebe a). Ga-amasị anyị inye a pụrụ iche ekele niile ndị dere a Freeware mkpọ.
Guzosie ike 1948 dị ka National Airlines nke Israel, anyị emewo n'ime a prestigious mba ụgbọelu.
Ya site na ịga na akụkụ nile nke ọrụ, na mmesi na anyị njem 'na-akpa ha zutere na oge, oge ọ bụla, EL AL na-họọrọ site Na obodo ntà dị ka otu n'ime ụwa atọ kasị oru oma ikuku na-ebu. Na ya gbasaa zuru ụwa ọnụ oti mkpuchi, na-akwado site otu mba netwọk nke 77 ahịa ọrụ, EL AL awade enweghị atụ Israel ile ọbịa, a enyi na enyi na ahaziri aka na-eme ka oge ofufe na-eme ka EL AL ihe karịrị nnọọ a adaba mode nke njem.
Na anyị pụrụ iche Nchikota eji enyere ndụ aka na uru, nke ịbụ maka mba ndị na-amasị, na-eme EL AL aghọwo a họọrọ zuru ụwa ọnụ ụzọ ámá n'akụkụ nile nke ụwa. (Isi: El Al website)
Nke a ngwugwu mejupụtara ndị na-esonụ ugbo elu:
- Boeing 747-400F Ibu + VC
- Boeing 767-300ER dịghị VC ma zuru 2D panel
- Boeing 777-200ER + VC daashi:
The ugbo elu n'okpuru bụ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke nsoro na-aba na-pụtara ìhè. Ya mere, ha na-awa dị ka a ego.
- Boeing 747-200 + VC (RFP ochie livery)
- Boeing 767-200 (ochie livery) dịghị VC ma zuru 2D ebi ndụ
A na-etinye ụgbọelu ọ bụla na sistemụ nkwupụta maka ndị nnabata na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ka ha kwuo okwu, GPWS (Sistemu Ọdụdọ Usoro Ọdịmma), usoro Pushback, ụda ọdịnala, ederede abalị, ihe ngosi, ndozi nke ahụhụ ndị nkịtị, mmegharị nke P3Dv1, ọfụma ọhụrụ na ndị ọzọ.
All ugbo elu na-gụnyere na akwụkwọ, ọtụtụ mgbe ọ bụ readme faịlụ, akwụkwọ ntuziaka, DOC, wdg
Prepar 3D v2.x: Incompatibilities atụ anya
- aircraftgbọ elu niile dakọtara P3Dv2 ewezuga Boeing 747-200 Njikere Maka Pushback (RFP) ụfọdụ gauges anaghị arụ ọrụ, gụnyere "ogwe mmanụ" na "igwe elele".
- The VC nke 777-200ER na 757-200 enweghị ọtọ click ntụpọ na ụfọdụ gauges Flash, ma i nwere ike oelu si 2D panel.
- Usoro mgbochi ngwa ogu ana-atu atu adighi aru oru n’okpuru P3Dv2 - pịa (i)
- Ma eleghị anya, ndị ọzọ chinchi ma nta.
Anti-atu atu usoro
El Al bụ ndị kasị dịrị nchebe ụgbọelu na ụwa dị ka ọ na ihu na-aga n'ihu eyi ọha egwu egwu, ya mere, ya nsoro na-onwem na nche na usoro-efu ọtụtụ nde dollar kwa ugbo elu.
Nanị ka El Al nsoro, ihe mgbochi-agha usoro bụ ugbu na ugbo elu (pịa (i) iji rụọ ọrụ). Ụgbọ elu na ochie na agba na-adịghị onwem na a n'usoro, n'ihi na n'oge ahụ El-AL adịghị eji ya. Nke usoro ihe a bụ karịsịa bara uru n'oge takeoff na ọdịda megide adịghị anya akụ ụta, anyị apụghị ikwu na El-AL-eji kpọmkwem usoro karịa nke a mkpọ n'ihi na ụlọ ọrụ chọrọ ka nzuzo ya akụrụngwa. Otú ọ dị, C-130 Hercules na-n'ezie na-eji ya. Ihe àmà image (n'aka ekpe):
Na oge mbụ, Rikoooo megharia ma mezie Boeing 747-200 RFP (Njikere Maka Pushback) maka FSX na P3Dv1 na-ejigide okporo ụzọ mbụ, nke a add-on A maara nke ọma dị ka ihe kachasị mgbagwoju anya nke dịla na freeSware maka FS2004, gụnyere usoro ezigbo ọfụma, sistemụ hydraulic, INS (Sistemụ Ntugharị Na-enweghị Iwu) wdg.adịghị ma online) ịkọwa usoro maka injin amalite FSX. a add-on dị dịka a daashi a mkpọ ma ọ dịkwaghị a akụkụ nke ahụ n'ezie nsoro.
Ọ dị mkpa ịgbaso akwụkwọ ntuziaka nke agụnyere na mkpọ: Bido NchNhr / Add-ons Rikoooo / Flotte El Al FSX & P3D / Dabere na XXX ma ọ bụ na njikọ dọkụmentị: "C: / Ndị ọrụ /votre_username /AppData / Ngagharị / Microsoft / Windows / Malite NchNhr / Mmemme / Rikoooo Add-ons"
ỊDỌ AKA NA NTỊ: The ins nlele (Inertial Navigation System) na-adịghị gụnyere ndị 747-200, ị nwere ibudata ya iche iche, ndị 747 panel a na-ama tupu-ahazi Rikoooo-arụ ọrụ a nlele Delco Carousel IV-A ins v. 1.51 si simufly.com.
download Delco Carousel IV-A ins (Akpaka nwụnye): https://www.simufly.com/ins/download.html
Ole na ole oyiyi si 747-200 RFP (Daashi):
Global screenshots, pịa ka enlarge (ekele AgbụrụFSX):
Onye edemede: Ndepụta zuru ezu na ngwa-ngwa / ngwugwu